Mogadishu Journal » 2021 » March » 29
England steps slowly out of lockdown, and into swimming pools
People can meet in the open air and outdoor sports facilities have reopened, in part thanks to a swift vaccine rollout. 29 Mar 2021 England has taken a significant step on its way out of lockdown, with outdoor meetings and activities permitted for the first time in months, but...
Magaalada Ceelbuur – Waayihii Wacnaa iyo Murugada maanta heesata !!
Maqalka magaalo xadaari ah oo qarniyo badan lala xiriirin jiray wax-soo-saar muuqda, ilbaxnimo iyo nolol sarreysa inay maanta kamid tahay magaalooyinka ugu dib-dhacsan dhulka Somaaliyeed, in badan, waxay ku tahay uur-ku-taallo iyo caloolyow. Waayo waxa aad isku weydaaran muqaalka...
Ciidamada milatariga Soomaaliya oo howlgal qorsheesan fuliyay (Daawo Sawirada)
Ciidamo katirsan milatariga Soomaaliya gaar ahaan qeybta 60-aad ayaa howlgal qorsheesan waxa ay ka fuliyeen inta u dhaxeysa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo deegaanka Daynuunay . Howlgalkan ciidamada fuliyeen ayaa la sheegay in uu ahaa mid lagu baacsanayay...
Madaxda Maamul goboleedyada iyo Wakiilada Beesha Caalamka oo kulmay (Sawirro)
Muqdisho:-Waxaa goordhaw hotel kuyaala xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Madaxda maamul goboleedyada dalka iyo qaar kamid ah Wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya. Kulankan xarunta Xalane ka dhacay ayaana ah mid looga hadlayay khilaafka ka taagan...
Markabkii xayiray Kanaal Suweys oo lagu guuleestay in marinka laga saaro (Sawirro)
Dadaalo maalmo badan socday kadib ayaa ugu dambeyn lagu guuleestay in laga saaro marinka Suweys Markab weyn oo nuuca kunteenarada qaado ah sabab u noqday in ay xayirmaan maraakiib badan oo kanaalkaasi ku kala gudbi jiray. Markabka Ever Given oo dhirirkiisu gaarayay 400m (1,300ft)...
Qarax dad badan ku dhinteen oo saakay ka dhacay Degmada Dayniile
Waxaa saakay qarax xoogan oo dhaliyay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay Degmada Dayniile, waxaana qaraxan lala eegtay gaari uu la socday xoghayaha degmada Dayniile Mahad Sharaawe Qaraxan ayaa ka dhacay agagaarka xarunta Degmada Dayniile gaar ahaan goob Suuq ah...